Ọzọ okomoko Service
The kasị emeru ihe ùgwù na okomoko na-efe efe onwe. Ọ dịghị ihe dị ka mara mma dị ka ime nke a onwe ugboelu. Ọ bụ ihe ịtụnanya karịa interiors nke kasị okomoko obibi na yachts. A ukwuu na-dara oké ọnụ ụlọ ga-ose elu gị onwe ugboelu njem.
Ndị ọgaranya na ndị a ma ama ofufe naanị. Hollywood siri, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na n'elu azụmahịa uloru ahọrọ ìhè ugboelu ichata na-ejere ụgbọelu njem. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na-ezi ihe nke ndụ, ị ga-n'anya onwe ugboelu njem.
Efe efe onwe bụ dara oké ọnụ. Ìhè ugboelu ichata ọrụ ga na-enye gị na bụla conceivable okomoko. Ị ga-enwe ihe dum akwọ ụgbọ na-eje. Ị ga-ebi ezigbo nri na ntụrụndụ.
E nwere ihe a mere na ndị niile n'elu uloru na-efe efe onwe. Ọ bụ n'ihi na ha chọrọ ịnọgide na-arụpụta mgbe ha naeje. Ị nwere ike ghara ịrụpụta ihe na ụgbọelu na-ere ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-efe efe ntinye-larịị ugboelu ma ọ bụ onye ugboelu. Enweghị nzuzo na confidentiality ga-eme ka ị na-enweta dị mkpa azụmahịa oku mgbe ị na-eji ụgbọelu na-ere.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị okomoko nọdụ na-abaghị uru n'oge a 13-hour ụgbọ elu, gị mkpa ìhè ugboelu ichata ọrụ. Na nke a ọzọ, Ị nwere ihe niile na ị chọrọ ịnọgide na-enwe ọnụ ọgụgụ kasị elu na arụpụtaghị. The jụụ na serene gburugburu ebe obibi nke a onwe ugboelu bụ ya uru kasịnụ. Na mgbakwunye, ike na-arụ ọrụ na-eme ka oku na-enweghị ịkpọpu anya ndị bịara abịa bụ oké plus.
Ọ dịghị ihe gbagwojuru Private Jet Travel
When you reserve an entire plane for yourself, ị ga-esi karịa n'elu-notch okomoko. Ị ga-enwekwa-enweghị atụ ndirinfe na mgbanwe. Ị gaghị idi ogologo queues ma ọ bụ na-egbu oge flights. Na a nnọọ ìhè ugboelu ichata ọrụ, ị bụ na-elekọta ihe niile. Ị kpebiere mgbe ụgbọelu ga-akwali, na ebe ọ ga-adaa. Akwụkwọ gị microjet ugbo elu ichata ọrụ ugbu a! -gi ikuku njem ahụmahụ na-esonụ larịị.
Ìhè Jet Type:
agụ nkwọ 10
eklips 500 (VLJ)
Private Jet Charter Site ma ọ bụ Iji Augusta, Columbus, Savannah, Atlanta, GA